Budata FlashGet maka Windows
Free Budata maka Windows (6.08 MB)
FlashGet bụ onye njikwa nbudata na-eduga yana ngwa ngwa nwere ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ ịntanetị kachasị elu nụwa. Usoro a, nke na-enye gị ohere ịme nbudata gị ngwa ngwa, yiri ka ọ na-eme ka ndị ọrụ ya ghara ịhapụ mmasị ha na njirimara ndị agbakwunyere ọhụrụ.
Akụrụngwa efu a, nke nwere njirimara nke ịga nihu na nbudata faịlụ ị malitere na kọmputa gị site na ịntanetị, na-eji usoro MHT (Multi-server Hyper-threading Transportation). Ihe omume a, nke na-akwado ọtụtụ protocols dị iche iche (HTTP, HTTPS, FTP, BT, MMS, MMST, RTSP, eMule), nwere ezigbo njikwa akwụkwọ. FlashGet nwere ike ịbawanye ọsọ nbudata ruo ugboro ise site na ikewa faịlụ.
Njirimara ụdịdị ọhụrụ:
Ọ na-akwado HTTP, FTP, BT na eMule protocol.
Usoro P4S emepụtara ọhụrụ na-abawanye ọsọ nbudata.
Nkwado maka IE6, IE7, IE8 na Firefox
Nha faịlụ: 6.08 MB
Mmepụta: Amaze Soft